प्रकाश गिरी – मझेरी डट कम
by Prakash Giri
जात्रामै त भेटिएकी हो ऊ ! जीवन पनि जात्रा नै त हो ।
मानिसहरू आफ्नो चरित्र छोपेर सधैँ झुटो आवरणमै त हिँडेका छन् यहाँ । तर खै आज मुकुटहरू नाँच्दामात्र चाहिं किन जात्रा भो ! अचम्म छ यहाँ… झुटको खेतीलाई कसैले जात्रा भन्दैनन् । तर व्यङ्यको नाम दिएर वास्तविकता दर्शाउदा चाहिं दुनियाले रमाइलो मानी मानी ताली पिट्छन् ।
अल द बेष्ट
छ्या! कस्तो प्यारीको वैँशभन्दा पनि उखर्माउँलो गर्मी आज! साँच्ची…मोरीले बिहानै फोटो राखेकी थिई। कारखाना जान ढिला हुनाले प्रोफाईल हेर्न पनि पाईएन! मेरो साहुँ एकदमै किचकिचे छ…।
सधैँ मोटिका फोटोसँगै आँखा जुधाँएर बस्ने भएर हुनुपर्छ, मोटिको टाईमलाईनको नक्शा निकै प्रष्ट छ मलाई। उसको ‘विईसिङ्ग फर चेन्ज’ वाला पोष्ट पछाडि हामी एस्तै गर्मी छेल्न भद्रकाली जाँदाको फोटो थियो, आजैँ हटाईछे…सिधैँ उसको नत्थीवाला फोटो देखियो। नत्थि लगाएका यूवतीले मलाई पगालीहाल्छन्। मोरीले त नत्थि नलागाँउदै पगालेकी हो!
जवान मन्, अधबैँसे उमेर
सिरकमुनि मुन्टो लुकाएरै फेसबुकको ‘न्युज फिड’मा दुई-तीन किलोमिटर मर्निङ्-वाक गरीसकेको थिँए, एउटा फ्रेन्ड रिक्योष्ट आयो – ‘स्वेता सिम्खडा’।
मैले रिक्योष्ट एसेप्ट गर्नासाथ म्यासेज पठाँए – “ओई! के छ खबर? सञ्चै छ्यौँ?”
“अँ यार! तिमिले त माया नै मार्यौ! कहिल्यै खोजेनौँ है मलाई?”
“मुटुभरी प्रेम बोकेर ‘आई लभ यू’ भन्दा ब्लक गरेकि होईनौ? म त त्यो बेलादेखि आजसम्म दिनरात तिमीलाई नै सम्झेर बसिरा’छु नि!” – म जिस्किएँ।
मलाई निकै उकुश-मुकुश भइरहेको छ। तीस वर्षसम्म बिताएका स्वतन्त्र पलहरू अब हरण हुदैँछन्, बाटोमा कुनै सुन्दर युवती देख्दा मुस्कुराउँदै टोलाउनुको सट्टा आँखाहरू भुँईको धुलोमा गाडेर हिड्नुपर्ने लाचार विवशताले मलाई अंगाल्दै छ। हो…मेरो बिहे हुदैछ र म दुलहिको घरमा मण्डवरुपि जेलभित्र कैद छु।
“ल अब जुठो खाने!” – कोही बोल्दैछन्। पण्डितलेनै भने कि अरु कसैले भन्ने मैले भेऊ पाइन।
“किशोर अवस्थाको प्रेम केवल आकर्षण हो” – महापुरूषहरू भन्दछन्।
कहीं कतैका प्रवचन वा स्कुले विद्यार्थीका कार्यक्रमहरूमा यस्तै सुनिन्छ अनि म खिस्स हाँस्दछु।
“तिमीले पनि मन पराऊथियौ कि क्याहो कसैलाई?” – श्रीमानले मतिर पुलुक्क हेरेर हाँस्दछन्।
“म यिनीहरूलाई हेरेर हाँसेकी!” – म आफ्नो दोष आठवर्षे छोरा र छ वर्षे छोरीमा थुपार्ने कोसिस गर्दछु।
“यिनीहरूको त बेला आउँदैछ।”